Alshabaab oo beenisay inay Ciiddanka Kenya dileen Madixii Sirdoonka Alshabaab iyo Saraakiil kale – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Alshabaab oo beenisay inay Ciiddanka Kenya dileen Madixii Sirdoonka Alshabaab iyo Saraakiil kale
Afhayeenka Hawlgalladda ee Alshabaab, Sheekh C/casiis Abu Muscab ayaa gaashaanka ku dhuftay sheegashadaasi, kuna tilmaamay Borobogaando loogu talagalay in dadka Kenyanka lagu marin-habaabiyo.
Afhayeenka oo la hadlay Idaacadda Andalus ee ku hadasha Codka Alshabaab ayaa tilmaamay inaysan jirin Saraakiil lagu dilay duqeyn, sida ay sheegteen Milliteriga Kenya.
“Warka ka soo baxay Kenya waxba kama jiro, waxayna hadalkaasi doonayaan inay ku niyad dejiyaan qoysaskii Askarta Kenyanka ee looga dilay Ceel-cadde” ayuu yiri Afhayeenka Hawlgalladda ee Alshabaab.
Afhayeenka waxa uu sheegay inuu nool yahay Madaxa Sirdoonka ee Alshabaab, Mahad Karatay, kaasi oo ay Ciiddanka Kenya sheegeen inay duqeyn ku dileen isaga iyo Saraakiil kale oo ka tirsan Alshabaab.
Hadalka Alshabaab ayaa soo baxay, kadib, markii ay Wasaaradda Gaashaandhigga Kenya maanta soo saareen War ay ku sheegeen inay Mahad Karatay iyo Saraakiil kale ku dileen weerar dhinaca Cirka oo bishan 8-dii ka dhacay inta u dhexeysa Degmooyinka Bu’aale iyo Saakow ee Gobalka J/dhexe.
Afhayeenka Ciiddanka Kenya, Kolonel David Obonyo ayaa sheegay inay Mahad Karatay ku dileen duqeyn xilli uu ku sii jeeday Xero ku taalla inta u dhexeysa Saakow iyo Bu’aale, si uu tababar ugu soo xiro 80 dagaalyahan oo uu Tababar u soo dhamaaday.
Waxa uu intaasi ku daray inuu Mahad Karatay door muhiim ka qaatay weerarkii ay Alshabaab bishii hore ee Janaayo ku qaadeen Xerada Ceel-cadde ee Gobalka Gedo, kuna dileen ku-dhawaad 130 Askari.
Dhinaca kale, Waaxda Arrimaha Dibedda ee Maraykanka, ayaa waxay horey abaalmarin lacageed oo dhan 5 million oo Dollars dul-dhigtay Madaxa Sirdoonka Alshabaab, Mahad Karatay oo loo yaqaano magaca C/raxmaan Maxamed Warsame, kaasi oo ay ku eedeeyeen inuu ka dambeeyay weerarkii sannadkii hore lagu qaaday Jaamacadda Garissa ee Wbari Kenya, ee lagu dilay 148 qof oo u badnaa Ardayda Jamaacadda.
(LA-YAABKA & SAWIRO): Bahalo macluul darteeda iyaga is-cunayo.
(LA-YAABKA & Sawiro):Britain oo laga digay Kalluun ilkaha dadka oo kale leh oo Khatar gaar ku ah ragga.